मलाई ससुराले जीवनजलको जस्तो प्याकेटमा औषधी हो यो खाउ निको हुन्छ’ भनेर खुवाउनु भयो त्यसपछि म बेहोस भएँ त्यसपछि…. – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Video/मलाई ससुराले जीवनजलको जस्तो प्याकेटमा औषधी हो यो खाउ निको हुन्छ’ भनेर खुवाउनु भयो त्यसपछि म बेहोस भएँ त्यसपछि….
मलाई ससुराले जीवनजलको जस्तो प्याकेटमा औषधी हो यो खाउ निको हुन्छ’ भनेर खुवाउनु भयो त्यसपछि म बेहोस भएँ त्यसपछि….
टिकापुर। ‘मलाई ससुराले जीवनजलको जस्तो प्याकेटमा औ ष धी हो यो खा नि-को हुन्छेस् भनेर खुवाउनु भयो त्यसपछि म बे हो स् भएँ । तरपनि अलिअलि हो स् छँदा उहाँले मलाई मेरो खु-ट्टा म सा र्दै, छा म्दै गरेकोसम्म थाहा छ । त्यसपछि थाहा पाईन ।’
यो भनाई हो ससुराबाट ब ला त्कृ त बुहारी सपनाको (नाम परिवर्तन) । सपनाको श्रीमानले उनलाई छाडेर गएपनि उनी सासुससुराको स्या-हार गरेर बसिरहेकी थिईन् ।
छोराले छाडेर गएपनि बुहारीले आफ्नो स्याहार गरेको छ भन ठानेर बुहारीलाई माया, सम्मान र सं-रक्षण गर्नुपर्ने ससुराले उल्टै बुहारीलाई औ ष धी खु वा एर बे होस् बनाई त्यो प्रयासलाई जारी नै राखिरहे ।
‘घरमा सासु नभएको बेला ससुराले मलाई कुर्ता सुरुवाल नलगाएस्, म्याक्सि लगाएस् भन्नुहुन्थ्यो । घरदेखि माथि खुल्ला ठाउँ छ जा-म् भन्नुहुन्थ्यो ।’ ससुराले आफुलाई भनेको कुराहरु सपनाले मिडियामा सुनाईन् ।
घ-टना पछि पनि उनलाई श्रीमानले साथ दिएनन् । तेरो कारणले बुवासंग नराम्रो भयो । तँलाई त हामीले श्रीमती बनाएर ल्याएको होइन । यहाँ बेच्न ल्याएको हो ।
तँलाई बेचेर १० लाख त आउँछ त्यसले म आफ्नो ब्य-वस्था गर्छु भनेर श्रीमानले चे ता वनी दिएको महिलाको भनाई छ । श्रीमानको यस्तो कुरा सुनेपछि उनले कम्पनीका मालिकलाई भनेर आफुलाई नेपाल फ-र्काइदिन आ-ग्रह गरेको बताएकी छन् ।
उनले रेलमा आउँदा पनि श्रीमानले चे ता वनी दिइरहेको बताइन् । श्रीमानले त्यस्तो धोका दिएपछि उनी अहिले टिकापुरमा एक्लै बस्दै आएकी छन् । उनीसंग एक छोरी छन् । तैंले छोरी ज-न्माइस्, अब तेरो काम छैन भन्दै घरवाट निकालेको बताएकी छन्।
अब खाडीबाट खर्चविहीन नेपाली नि:शुल्क आउन पाउँछन्, होटल पनि फ्रि : मन्त्री भट्टराई
महाकाली पाथिभरा माता बोल्न थाल्नुभयो : देशमा अनिष्ट हुदै छ
७५ बर्षे आमाले कामदार राखेर होटलमा यौ,न ध,न्दा गर्दा प्रह,री र पत्रकारनै चकि,त(भिडियो)
ब’लात्कारी र भ्रस्टाचारीलाई फाँ’सी दिईयोस् -नायिका स्वेता खड्का
प्रेम सम्बन्धबारे हल्ला चलेपछि पूर्व अधिराजकुमारी पूर्णिका बोलिन्… (भिडियो)